Ipaki yeSixeko, iApartment eNtsha kwikota yaseBohemian
Le ndlu iyi-60 m² ibekwe kwindawo enoxolo kufutshane norhulumente kunye nepaki yedolophu.Isikwere sesixeko esisembindini sikwimizuzu esi-7 yokuhamba kwaye isitrato esidumileyo se-bohemian sikwi-5 min walk apho ungafumana eyona ndawo yokutyela yesintu.Indawo ilungile. ukuphonononga isixeko kunye nobomi basebusuku kwaye ilungele ukuhlala ixesha elifutshane ukuba uhamba zombini ishishini okanye uyolo.
Le ndlu inegumbi lokuhlala elivulekileyo elinendawo yokutyela kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, linegumbi elinye lokulala, isofa ekhululekileyo (inokusetyenziswa njengebhedi ephindwe kabini) Igumbi lokuhlambela elinendlu yangasese kunye neshawari. Inokulingana kakuhle nabantu aba-4. Indlu iza nazo zonke izinto eziluncedo kunye nayo yonke into oyifunayo ukuze ukonwabele amava abalaseleyo ngexesha lokuhlala kwakho eSkopje:
- Izinto eziyimfuneko: Amashiti ebhedi amatsha nacocekileyo, iitawuli, ishampu, isomisi seenwele kunye nephepha langasese
- 49 intshi TV
-I-Air Conditioning: Yahlula inkqubo enokhetho lokupholisa kunye nokufudumeza
- Ubushushu basesiphakathini
-Izixhobo ekhitshini: ifriji, isinki, isitovu sokungeniswa,, isicinezeli selamuni yombane, iketile yamanzi ombane, ikhitshi, idinning ware, iswekile, ityuwa, ukukhetha iziqholo, ukukhetha iti)
-Isonka sethowusta esishushu esishushu
-Isiginali eyomeleleyo engenazingcingo yoqhagamshelo lwe-intanethi olukhawulezayo. I-Intanethi ibonelelwa ngumqhubi weCable ngesantya ukuya kuthi ga kwi-30/1 Mbps kwaye iphathwa ekuhlaleni ngezixhobo zethu zothungelwano ezikhawulezayo ze-Linksys.
- Amanzi ashushu afumaneka ngalo lonke ixesha
- Indawo yokupaka igaraji yabucala
4.90 · Izimvo eziyi-110
Iindawo zokutyela ezilungileyo kakhulu zasekhaya kunye nezamazwe aphesheya zikufutshane kakhulu nefulethi. Kwakhona ezinye iivenkile ezilungileyo zekofu, kodwa kwangaxeshanye i-apatment inendawo esesitalatweni. Isikwere sesixeko kunye ne-zoo ziku-5-7 min ukuhamba ukusuka kwiflethi.
Ndihlala kwisakhiwo esinye kwimigangatho emibini apha ngasentla, ngoko ndiyafumaneka ukuba ndiphendule yonke imibuzo kunye neemfuno zakho nangaliphi na ixesha losuku. Ukhululekile ukuba undibuze, kwaye ndiya kuvuya kakhulu ukukucebisa iindawo!
Ndihlala kwisakhiwo esinye kwimigangatho emibini apha ngasentla, ngoko ndiyafumaneka ukuba ndiphendule yonke imibuzo kunye neemfuno zakho nangaliphi na ixesha losuku. Ukhululekile…